Kufanele bazihlambe ngokuthemeleza aboHlanga - Bayede News
Sizithola sesibhekene nezinkinga siyisizwe ingoba silahle indlela yakwethu yokukhuleka salandela eyabanye esesibabona bona nezinto zabo bengcono kunokwethu okhokho bethu abakhuliswe ngakho
Bandla lakwethu akesithathe nanku umkhumiso kuhle kwesijongo noma isibhuzazana uma ufuna sizale ngambili. Ulwazi ngobuthina luyaluvuselela uthando ngathi kanti uthando ngathi luyakusenza senze kangcono senzela thina,yingakho sizithola sesimbandaza sesikubona ichilo okwethu ngenxa yokwantuleka kolwazi ngathi.
Ngibuka uvuvatha izwe lonke olubhekene nalo kanye nemizamo yokuhlenga isimo kodwa kunhlanga zimuka nomoya,yingoba sizama ukulungisa izingqinamba zethu ngendlela yasentshona ekubeni singabe gade leningizimu, buka nje uma singake simise konke siyisizwe sinikele entabeni siyonxenxa uNomdede noma iNkosazana Yezulu uNomkhubulwane ukuba isikhumbule isiphe umoya wenkuthalo kunowokunyemfuza.
Ngathi ngiyabona abeSILO sebethemeleza entabeni bebika bevundulula imilandu namabibi asezinhliziyweni bevuma iziphambeko zabo zokungahloniphi imvelo namasiko abo kanye nenhlamba abachapha ngayo izinyandezulu bethi ngamadimoni. Ngokuntantatheka kwengqondo ngiyambona owesilisa kulo mthemelezo exolisela lezi mfumbanqokwana ezidlwengula izingane zethu kanjalo nowesifazane exolisela amantombazane ashiya izingane dengwane emigqonyeni kadoti.
Uma singaqala lapha siyisizwe siyobe sigqonsule esikhulu isibopho ngoba akukuningi okonakele yinyathuko nje ebheke ekhaya esidukele.
Noma sinomzizizi okungenani masigulele ngasekhaya. Kuyadumaza ukubona aboHlanga bethandaza baze begxize amathe ngenxa yokuthi sigqoma etsheni kunokuthi sifake ikhuba emhlabathini olifenya. Kumapeketwane kufinyela indoda kwenaba umfazi akekho othelela omunye amanzi kuganene imithuthwane.
Uma kuthethwa icala enkantolo kuye kubhekwe umlando wecala elicishe lefane nalelo okusuke kubhekwene nalo bese kuphuma isisombululo kanjalo nendlela yokukhuleka kithi kumele incike nkomo ezimisweni zomthemelezo ngoba inkonyane inyathela lapho kunyathele khona unina.silimele sinje nje kungenxa yokulahleka kolwazi oluthe ukuzika ngathi, uma sizohlalela ukusakaza umhlabathi ngonyawo kuphela sengathi asikwazi ukusebenzisa ubuchopho indaba yethu iyoxoxwa ngekhwela, lesi yisikhathi sokuba sifundise izingane zethu ngemigomo yokuphila kanye nemidanti yekhaya hhayi le nto yokuncenga njalo uma sikhuleka kumele abantwana bethu bazi ukusuka nokuhlala ngokumele kwenzeke egcekeni ikakhulukazi ezikhathini zobuswezi.
Yebo amagumbi okukhonzela uMdali athe chithi saka kodwa ngabe senza ngendlela enezimiso zobu-Afrika na? Uma siqhubeka nokuncela amathe abezizwe sithi abantwana bethu babe yini ngomuso?
Uma ubheka umbuso waseRoma kanye nenkolo yabo okuningi kuncike emigomweni yokubuswa kwezwe labo kanye namasikonkolo abo, kwathi uma ababusi bephelelwa ngamandla kwangena abaholi abafaka imijiva emide ababizwa ngopapa le nto yaqhubeka nokushutheka umuzwa othi umbuso waseRoma usabalele izwe lonke ngenxa yokuthi yithi esigcwala emasontweni abo siyeke okwethu thina asinamthelela ezweni.
Isikonkolo lethu ligaywe lagxifizwa ngezethu izinyawo siphakamisa izinkolo ezifiphisa okwethu. Yingakho-ke namuhla singazi nokuthi siqale kuphi uma kumele sithemeleze kuMdali.
Kubungazwa ubunzulu bobuciko be-Afrika
Kufanele ngabe uma izingane zikhula zifundiswe ngamakhambi okuzelapha, yindlela okuhlatshwa ngayo isilwane uma kunecece egcekeni kanye nendlela okukhulekwa ngayo.
Libunjwa luseva bakwethu okushutheke enganeni isakhasa akusoze kwashabalala ngisho ingadla imbamba ingamane ikhihle isililo ithi ubaba nomama bathi!! Bakwethu yichwane lenyoka kuphela eligcina unina mhla lizalwa yingakho izinyoka zisiluma nje ngoba uma izingane zethu zingafundiswanga ngobumqoka bokugcina imvelaphi ziyosithuka ngoba vele azifundiswanga lokho akwehlukanga nesenzo sechwane lenyoka.
Ngoba ingane ithuka amasiko ayo nje kungenxa yokwantula, nakuba selisishonele kepha sisengathundlaza siphinde sithintithe izintuli eziqaqele imvelaphi yethu sabele izingane okungokwazo. Umthemelezo uyimpendulo kuzo zonke izingqinamba ngoba uyingonyuluka hhayi ukubanga umsindo sengathi unamabhungezi.
Endulo uma kunenkinga evelile kwakuzothwa kuthaphuzwe amathongo anxuswe ukuba akhulume noMdali kodwa konke kwakuncike ekuziphatheni kwesizwe ubuqotho nentobeko namuhla sithi singezwani nemindeni sigijime sithi siyothandaza ngabe kuyagcotshwa yini kungageziwe?
Singcolile siyisizwe ngenxa yokuhanqazela amasiko esingawazi nokuphuza emifuleni enezibhidi. Wena woHlanga uboqaphela ungabhukudi kwesinengwenya.
nguMbuso Khoza Nov 6, 2020